Mitady fandresena isan'andro
« Tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin’ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka? Mihazakazaha toy izany mba hahazoanareo. Ary ny mpifazakazaka rehetra dia mahonon-tena amin’ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho lò ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lò. » 1 Kor.9:24,25.
Firy taona izay isika no tao amin’ny zaridainan’Andriamanitra? Inona ny tombontsoa nentitsika ho an’ny Tompo? Manao ahoana ny fanatrehantsika ny mason’Andriamanitra izay mahita ny zava-drehetra? Mitombo amin’ny fanajana, ny fitiavana, ny fanetren-tena sy ny fahatokiana an’Andriamanitra ve isika? Maneho fankasitrahana noho ny famindrampony ve isika? Mitondra fitahiana ho an’ny manodidina antsika ve isika? Maneho ny Fanahin’i Jesôsy ve isika ao an-tokantrano? Mampianatra ny teniny amin’ny zanatsika ve iaika, ary mampahafantatra azy ireo ny hatsaran’ny asan’Andriamanitra? Tokony haneho an’i Jesôsy isika amin’ny fahatsarana sy ny fanaovana ny tsara. Amin’izany no hampanentohento ny fiainana, ny toetra maha-te ho tia, izay maneho ny maha-zanak’Andriamanitra, mpandova ny lanitra.
Ry rahalahy, aoka tsy ho mpanompo kamo. Ny fanahy tsirairay dia tsy maintsy manohitra ny fironana ho amin’ny ota. Tsy tonga mba hamonjy ny olona ao anatin’ny fahotana i Kristy, fa mba ho afaka amin’ny fahotana. Nomeny fahafahana hanana fahamasinana isika, koa aoka tsy hionona amin’ny kilema sy ny tsy fahatomombanana. Rehefa mikaroka fatratra ny toetra tonga lafatra isika, dia aza hadinoina fa ny fanamasinana dia tsy mandritra ny fotoana fohy fa mandritra ny fiainana manontolo. Hoy i Paoly: “maty isan-andro aho” – 1 Kor. 15:31. Tokony handroso isan’andro ny fandresena ny tena. Mila manohitra ny fakam-panahy isan’andro isika, mba haharesy ny fitiavan-tena, amin’ny endriny rehetra .
Mila mikolo ny fitiavana sy ny fanetren-tena isan’andro isika, ary mamboly ireo toetra mendrika hankasitrahan’Andriamanitra sy mifanaraka amin’ny fiarahamonin’ny lanitra izay voatahy. Sarobidy tokoa ny teny fikasana ho an’ireo izay mikatsaka ny hanatanteraka izany asa izany. “Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin’ny bokin’ny fiainana tokoa Aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan’ny anjeliny.” – Apok. 3:5.